Galvanized Steel xusulka
Henan Jialie Industry Co., Ltd. waxa uu ku yaalaa ee Shiinaha ee bartamaha ganacsiga xarun-Zhengzhou. Waa Shiinaha ee ugu weyn ee gaarka loo leeyahay Al Industrial Co.Ltd, iyo mugga sheet Aluminum iyo coil dhoofinta darajada koowaad Joogta sagaal sannadood. Jialie waa shirkad isku dhafan leh ganacsiga adeegyada design, wax soo saarka, kala iibsiga technology iyo suuq. Shirkadda buuxda u dhaqmaan iyo kor ruuxyada "Si Live On Our Own Si Qaado Lead The Oo magooliyey", hadda, waxa uu ku sii kordhaya weyn, si dhakhso ah oo xoog ay. Zhengzhou Wanzhi Qalabka Co., Ltd. waa hoosaad ah, daacad laga leeyahay ee Jialie Group, laanta tube galvanized waxaa inta badan faraha kula jiro soo saaridda dhuumo saliidda & gaaska fasalka sare oo dheer oo doog ah dadka rayidka ah pipeline.So fog, waxa ay leedahay 4 hayo iyo share biibiile cusub shirkadaha, kaas oo sidoo kale loo arkaa mid ka mid ah saldhigyada soo saarka biibiile wayn.